Kpido: ịdị ọcha data | Martech Zone
Kpido: nhicha data
Oge obula, odi nkpa inyocha uzo ahia gi. Omume ndị ahịa na-agbanwe ka oge na-aga, usoro nke onye asọmpi gị gbanwere oge, na nyiwe azụmaahịa dijitalụ gbanwere oge. N'oge opupu ihe ubi dị ebe a, ugbu a bụ oge zuru oke maka ụdị iji mee ka mgbasa ozi ahịa dijitalụ ha dị ọhụrụ. Yabụ, kedu ka ndị ahịa si ewepu ngwongwo sitere na atụmatụ ahịa ha? N'ime ozi infograf ọhụrụ MDG, ndị na - agụ akwụkwọ ga - amụta ụzọ ochie ochie na ike gwụrụ iji tufuo nke a
Friday, February 19, 2016 Friday, February 19, 2016 Douglas Karr
Batara na otu izu na Vegas nke na-ewe ndị ọzọ ụlọ ahịa ahịa. Ike gwụrụ gị, ezigaghachila kpamkpam na email na ọrụ ndị ọzọ, ma ị nwere ụgbọ mmiri nke ọhụụ ọhụrụ kwesịrị ka a kwado ya ma banye n'ime usoro CRM gị. Na-ele anya na nnukwu aha nnabata nke aha, ị maara na ọ ga-ewe gị ụbọchị niile ịhazi data kọntaktị ahụ. Iji aka abanye ma na-ehicha data gị dị ka ikiri agba agba-na-agwụ ike na-agwụ ike na ihe
Wenezde, August 12, 2015 Jim Sterne kwuru
Data, dị ka mmiri, na-abịa n'ọtụtụ ụzọ. Uche mmadu amalitela inyocha otutu data na abia anyi n'ihi na odi otutu n'ime ya. Mgbe ị mepere anya na ntị gị, data dị ebe niile. A na-emeso agba nke mgbidi ahụ, ụda ikuku oyi na isi nke kọfị onye agbata obi gị dị ka iru mmiri. Mmiri dị n’ikuku oge niile mana ọ baghị uru
Wenezdee, Machị 1, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
M dere otu onye ọrụ taa na-ewusi ike mkpa ịdị ọcha Data dị na mbọ CRM gị. Na-ekwu, m, “Nhicha data na-esote Data Godliness” Says She, “Mgbe ahụ, m ga-anọ na Data Heaven” Chuckle!